Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafanina ao Bangladesh » Farafaharatsiny 21 no namoy ny ainy, am-polony maro no tsy hita popoka tamin'ny loza tamin'ny sambo tao Bangladesh
Vaovao Mafanina ao Bangladesh • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny manam-pahaizana dia manome tsiny ny tsy fikojakojana, ny fenitra fiarovana tsy azo antoka any amin'ny tokotanin-tsambo ary be olona noho ny tranga maro mahafaty.
Milentika ao anaty farihy iray ao amin'ny tanànan'i Bijoynagar atsinanan'i Bangladesh ny sambo mpandeha.
Sambo mpandeha no voalaza fa nifandona tamina sambo mpitondra entana.
Farafahakeliny olona 21 no maty tao anaty sambo nilentika.
Sambo mpandeha no voalaza fa nitondra mpandeha maherin'ny 60 nilentika tany amin'ny farihy atsinanan'i Bangladesh rehefa avy nifatratra tamin'ny sambo mpitondra entana.
Olona 21 farafahakeliny no maty ary am-polony no mbola tsy hita popoka tamina tranga niseho tamina farihy iray tao an-tanànan'i Bijoynagar, hoy ny tompon'andraikitra ao an-toerana.
Nifatratra ny tendrony vy an'ny sambo mpitondra entana sy ny sambo, ka nivadika ny sambo mpandeha, raha ny fanazavan'ireo tompon'andraikitra ao an-toerana.
Nahita vatana 21 ny mpamonjy voina nahitana vehivavy sivy sy zaza enina hatreto, saingy nampitandrina ireo tompon'andraikitra fa mety hiakatra ny isan'ireo maty.
Tsy fantatra mazava hoe firy ny olona tao anaty sambo tamin'ny fotoana nitrangan'ny fifandonana, ary firy no tsy hita popoka. Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny polisy any an-toerana dia olona 100 no sisa tavela tao.
Nikaroka faty ny mpanamory olona, ​​ary nantsoina ny miaramila avy amin'ny tanàna mifanila aminy. Nanatevin-daharana ny ezaka famonjena ihany koa ny mponina ao an-toerana.
Nilaza ny polisy fa farafaharatsiny olona fito no nentina tany amin'ny hopitaly iray rehefa navotana tamin'ny sambo rendrika.
51 kilometatra atsinanan'ny renivohitra, Dhaka, no faritra misy ny voina. Nanangana komity hanadihady momba ny loza ny manampahefana any an-toerana.
The hilentika no farany tamin'ny andiana tranga tahaka izany tany amin'ny firenena Azia atsimo. Tamin'ny volana aprily sy mey, 54 no maty tamina lozam-pifamoivoizana roa nanamontsana.
Tamin'ny volana Jona tamin'ny taon-dasa, nilentika tany Dhaka ny sambo iray taorian'ny nahavoa lakana iray hafa avy any aoriana, ary nahafaty olona 32 farafaharatsiny. Tamin'ny volana febroary 2015, farafahakeliny olona 78 no maty rehefa nifanena tamin'ny sambo mpitondra entana ny sambo feno olona iray.